Izindaba - Imakethe ye-E-Rickshaw - Ukuhlaziywa Kwemboni Yomhlaba Wonke, Usayizi, Ukwabelana, Ukukhula, Amathrendi, Nesimo Sezulu, 2020 - 2026
Imakethe ye-E-Rickshaw - Ukuhlaziywa Kwemboni Yomhlaba Wonke, Usayizi, Ukwabelana, Ukukhula, Amathrendi, Nesimo Sezulu, 2020 - 2026
I-E-Rickshaw iyimoto kagesi, enamasondo amathathu esetshenziselwa izinhloso zokuhweba ukuhambisa abagibeli nezimpahla. I-E-rickshaw yaziwa nangokuthi i-tuk-tuk kagesi no-toto. Isebenzisa ibhethri, i-traction motor, ne-powertrain kagesi ukuze ihambise imoto.
Oorisho bayindlela evelele yokuthutha abagibeli bezentengiselwano, ikakhulukazi kulo lonke elaseNdiya, eChina, e-ASEAN nakwamanye amazwe amaningi ase-Afrika. Izindleko zokuhamba eziphansi, izindleko eziphansi zorisho, nokuhamba kwazo emigwaqweni eminyene yasemadolobheni ezinye zezinzuzo zorisho, eziqhuba ukufunwa kwazo emhlabeni wonke. Ngaphezu kwalokho, izinkambiso eziqinile zokukhipha intengo, ukukhuphuka kwamanani kaphethiloli, izikhuthazo ngama-e-rickshaws, kanye nohla olukhuphukile lwama-e-rickshaws kugudlulela izintandokazi zabathengi kuma-e-rickshaws. Ngaphezu kwalokho, ukuvinjelwa okulindelekile kwezimoto ezinophethiloli kungenzeka kuthuthukise ukufunwa kwama-e-rickshaws.
Imakethe yomhlaba wonke ye-e-rickshaw ivinjelwe kakhulu yingqalasizinda yokushaja engathuthukile emazweni amaningi. Ngaphezu kwalokho, ukuntuleka kwemithetho nakho kubamba imakethe yomhlaba ye-e-rickshaw.
Imakethe yomhlaba ka-e-rickshaw ingahlukaniswa ngokuya ngohlobo lukarisho, umthamo webhethri, isilinganiso samandla, izingxenye, uhlelo lokusebenza nesifunda. Ngokuya ngohlobo lukarisho, imakethe yomhlaba ye-e-rickshaw ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili. Uma ucabanga ngesidingo esiphansi sokusebenza kahle, izinga lokwamukelwa kohlobo oluvulekile lwe-e-rickshaws luyakhula phakathi kwabathengi.
Ngokuya ngomthamo webhethri, imakethe ye-e-rickshaw yomhlaba wonke ingahlukaniswa ibe izingxenye ezimbili. Ukuphakamisa umthamo webhethri, kukhulisa ibanga le-e-rickshaw; yingakho abanikazi bekhetha amandla e-rickshaw aphezulu. Kodwa-ke, ngamabhethri wamandla aphezulu, isisindo siyakhula ngokulingana. Ngokwesilinganiso samandla, imakethe yomhlaba ye-e-rickshaw ingahlukaniswa ngezigaba ezintathu. Isidingo sama-e-rickshaws anamandla emoto phakathi kuka-1000 no-1500 Watt siyakhuphuka, okubhekiswe ikakhulu ekusebenzeni kwabo kwezindleko okuhambisana nokulethwa okukhulu kwe-torque.
Ngokuya ngezinto, imakethe ye-e-rickshaw yomhlaba wonke ingahlukaniswa ngezigaba ezinhlanu. Ibhethri liyingxenye ebalulekile futhi ebizayo ye-e-rickshaw. Amabhethri adinga ukulungiswa njalo futhi adinga ukushintshwa ngemuva kwesikhathi esithile, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle kwemoto. I-Chassis ingenye into ebalulekile ye-e-rickshaw ngakho-ke, iba nesabelo esikhulu semakethe, ngokwemali engenayo. Ngokuya ngesicelo, imakethe ye-e-rickshaw yomhlaba wonke ingahlukaniswa ekuthuthweni kwabagibeli nasekuthuthweni kwempahla. Ingxenye yokuthuthwa kwabagibeli ibiphethe isabelo esivelele emakethe, ngokwemali engenayo, ngonyaka we-2020, okukhonjelwe ekusetshenzisweni okwandayo koorisho ekushintsheni kwabagibeli. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwama-e-rickshaws yizinkampani zokuhamba ezidingeka kakhulu kungahle kuhambise ingxenye yokuhamba kwabagibeli emakethe.
Ngokwesifunda, imakethe ye-e-rickshaw yomhlaba wonke ingahlukaniswa ngezifunda ezinhlanu ezivelele. I-Asia Pacific ibe nesabelo esikhulu semakethe, ngokwemali engenayo, ngonyaka we-2020, okubhekiswe ikakhulu kwisidingo esikhuphukayo esivela kubathengi, izikhuthazo zikahulumeni kanye nezinqubomgomo ezisekelayo, ukuvinjelwa kwama-rickshaw anamandla kagesi, nokwenyuka kwamanani kaphethiloli. Ngaphezu kwalokho, orisho bayindlela yokuhamba evelele ezindaweni zasemadolobheni zamazwe amaningana e-Asia, njengeChina neNdiya. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kwabakhiqizi be-e-rickshaw abahola phambili emhlabeni kungomunye umshayeli ovelele wemakethe ye-e-rickshaw e-Asia Pacific.
Abadlali abakhulu abasebenza emakethe ye-e-rickshaw yomhlaba yiMahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD., Kanye nePace Agro Pvt. Ltd.
Umbiko unikeza ukuhlolwa okuphelele kwemakethe. Ikwenza lokho ngokuqonda okujulile kwekhwalithi, idatha yomlando, nokuqagela okuqinisekisiwe ngosayizi wemakethe. Ukuqagela okuvezwe kulo mbiko kuthathwe kusetshenziswa izindlela zokucwaninga ezifakazelwe. Ngokwenza njalo, umbiko wocwaningo usebenza njengendawo yokugcina imininingwane kanye nolwazi lwayo yonke imikhakha yemakethe, kufaka phakathi kepha kungagcini kulokhu: Izimakethe zesifunda, ubuchwepheshe, izinhlobo nezinhlelo zokusebenza.
Ucwaningo luwumthombo wemininingwane ethembekile ku:
 Izingxenye zezimakethe nezingxenyana ezingaphansi
Amathrendi ezimakethe namandla
 Sekela futhi ufune
 Usayizi weMakethe
 Amathrendi / amathuba / izinselelo zamanje
 Ukuncintisana komhlaba
 Ukuhlaziywa kochungechunge lwenani nokuhlaziywa kwababambiqhaza
Ukuhlaziywa kwesifunda kuhlanganisa:
 ENyakatho Melika (e-US naseCanada)
I-Latin America (Mexico, Brazil, Peru, Chile, nabanye)
 Intshonalanga Yurophu (iJalimane, i-UK, iFrance, iSpain, i-Italy, amazwe aseNordic, iBelgium, iNetherlands neLuxembourg)
 EMpumalanga Yurophu (ePoland naseRussia)
 I-Asia Pacific (China, India, Japan, ASEAN, Australia neNew Zealand)
 EMiddle East nase-Afrika (GCC, Southern Africa, naseNyakatho Afrika)
Lo mbiko uhlanganiswe ngocwaningo olubanzi oluyisisekelo (ngezingxoxo, ucwaningo, kanye nokubhekwa kwabahlaziyi abanolwazi) kanye nocwaningo lwesibili (okubandakanya imithombo ehlonishwayo ekhokhelwayo, amajenali ezentengiselwano, kanye nemininingwane yolwazi yezimboni). Umbiko uphinde uveze ukuhlolwa okuphelele kobungako nobuningi ngokuhlaziya imininingwane eqoqwe kubahlaziyi bemboni kanye nabahlanganyeli bezimakethe kuwo wonke amaphuzu abalulekile kuhla lwamanani embonini.
Ukuhlaziywa okwehlukile kwamathrendi akhona emakethe yabazali, izinkomba ezinkulu nezincane zomnotho, kanye nemithethonqubo kanye nemiyalo kufakiwe ngaphansi kocwaningo. Ngokwenza njalo, lo mbiko uheha ukuheha kwengxenye ngayinye enkulu esikhathini sesimo sezulu.
Amaphuzu avelele ombiko:
 Ukuhlaziywa okuphelele kokwasemuva, okubandakanya ukuhlolwa kwemakethe yabazali
Izinguquko ezibalulekile ekuguqukeni kwemakethe
 Ukuhlukaniswa kwemakethe kuze kufike ezingeni lesibili noma lesithathu
 Usayizi womlando, wamanje, novezwayo wemakethe ngokombono wenani nevolumu
 Ukubika nokuhlola intuthuko embonini yakamuva
 Amasheya ezimakethe namasu wabadlali ababalulekile
 Kwakhiwa izingxenye ze-niche nezimakethe zesifunda
 Ukuhlolwa okuyinjongo yomkhondo wemakethe
 Izincomo ezinkampanini zokuqinisa indawo yazo emakethe
Qaphela: Yize ukunakekelwa kuthathiwe ukugcina amazinga aphezulu okunemba emibikweni ye-TMR, izinguquko zakamuva zemakethe / eziqondene nomthengisi zingathatha isikhathi ukubonakalisa ekuhlaziyweni.
Lolu cwaningo olwenziwe yi-TMR luhlanganisa konke uhlaka lwamandla emakethe. Iqukethe ukuhlolwa okubucayi kohambo lwabathengi noma lwamakhasimende, izindlela zamanje nezisavelayo, nohlaka lwamasu okwenza ama-CXO akwazi ukuthatha izinqumo ezisebenzayo.
Isisekelo sethu esiyinhloko i-4-Quadrant Framework EIRS enikeza ukubonwa okuningiliziwe kwezinto ezine:
 Amamephu Okuhlangenwe Nekhasimende
 Imininingwane namathuluzi asuselwa ocwaningweni oluqhutshwa yidatha
Imiphumela etholakalayo ukuhlangabezana nakho konke okubekwe eqhulwini kwebhizinisi
 Izinhlaka Zamasu zokuthuthukisa uhambo lokukhula
Ucwaningo luzama ukuhlola amathemba okukhula kwamanje nawesikhathi esizayo, izindlela ezingasetshenziswanga, izinto ezibumba amandla abo emali engenayo, kanye namaphethini okufuna nokusetshenziswa emakethe yomhlaba wonke ngokukuhlukanisa kube ukuhlolwa kokuhlakanipha kwesifunda.
Lezi zingxenye zesifunda ezilandelayo zihlanganiswe ngokuphelele:
 ENyakatho Melika
 I-Asia Pacific
 EMiddle East nase-Afrika
Uhlaka lwe-EIRS quadrant kulo mbiko lufingqa ububanzi bethu bocwaningo oluqhutshwa yidatha nokweluleka kwama-CXO ukuze abasize benze izinqumo ezingcono kumabhizinisi abo futhi bahlale njengabaholi.
Ngezansi kunesifinyezo salawa ma-quadrants.
1. Imephu Yesipiliyoni Samakhasimende
Ucwaningo lunikeza ukuhlolwa okujulile kohambo lwamakhasimende ahlukahlukene oluphathelene nemakethe nezigaba zalo. Inikeza okuvelayo kwamakhasimende okuhlukahlukene ngemikhiqizo nokusetshenziswa kwensizakalo. Ukuhlaziywa kubhekisisa amaphuzu abo obuhlungu nokwesaba kuwo wonke amaphuzu okuthinta amakhasimende ahlukahlukene. Izixazululo zokubonisana nezobunhloli bebhizinisi zizosiza ababambiqhaza abanentshisekelo, kufaka phakathi ama-CXOs, ukuchaza amamephu wesipiliyoni samakhasimende ahambelana nezidingo zabo. Lokhu kuzobasiza ukuthi bahlose ukukhulisa ukuzibandakanya kwamakhasimende nemikhiqizo yabo.
Imininingwane ehlukahlukene ocwaningweni isuselwa kumijikelezo enabile yocwaningo oluyinhloko nolwesibili abahlaziyi abahlanganyela nalo ngenkathi kwenziwa ucwaningo. Abahlaziyi nabeluleki bochwepheshe kwa-TMR basebenzisa amathuluzi wokuqonda wamakhasimende abanzi emikhakheni eminingi kanye nezindlela zokuqagela ezimakethe ukuze bathole imiphumela, ebenza bathembeke. Ucwaningo alugcini ngokunikeza ukulinganisela nokuqagela, kepha futhi nokuhlolwa okungagcwalisiwe kwalezi zibalo kumandla emakethe. Le mininingwane ihlanganisa uhlaka locwaningo oluqhutshwa yidatha nokubonisana kwekhwalithi yabaninimabhizinisi, ama-CXO, abenzi benqubomgomo kanye nabatshalizimali. Imininingwane izosiza namakhasimende abo ukunqoba ukwesaba kwabo.
3. Imiphumela Ebonakalayo
Okutholakele okwethulwe kulolu cwaningo yi-TMR kuyisiqondiso esisemqoka sokuhlangabezana nazo zonke izinto eziseqhulwini zebhizinisi, kufaka phakathi lezo ezibaluleke kakhulu kumishini. Imiphumela lapho isetshenziswa ikhombise izinzuzo ezibonakalayo kubabambiqhaza bebhizinisi nezinhlangano zezimboni ukukhulisa ukusebenza kwazo. Imiphumela yenzelwe ukulingana uhlaka lwamasu ngamunye. Ucwaningo luphinde lukhombise ezinye zezifundo zakamuva zokuxazulula izinkinga ezahlukahlukene yizinkampani ababhekane nazo ohambweni lwabo lokuhlanganiswa.
4. Izinhlaka Zamasu
Ucwaningo luhlomisa amabhizinisi nanoma ngubani onentshisekelo emakethe ukuthi ahlele izinhlaka ezibanzi zamasu. Lokhu kubaluleke kakhulu kunakuqala, uma kubhekwa ukungaqiniseki kwamanje ngenxa ye-COVID-19. Ucwaningo lubheka ukubonisana ukuze kunqotshwe ukuphazamiseka okunhlobonhlobo okwedlule futhi lubone okusha ukuze kuthuthukiswe ukulungela. Izinhlaka zisiza amabhizinisi ukuhlela ukuhlela kwawo amasu ukuze alulame kulezi zindlela eziphazamisayo. Ngaphezu kwalokho, abahlaziyi bakwaTMR bakusiza ukuthi wehlise lesi simo esiyinkimbinkimbi futhi ulethe ukuqina ezikhathini ezingaqinisekile.
Lo mbiko usikhanyisela ngezici ezahlukahlukene futhi uphendula imibuzo efanele emakethe. Ezinye zezinto ezibalulekile yilezi:
1. Yikuphi okungaba ukukhetha okuhle kakhulu kokutshala imali kokungena kumugqa omusha womkhiqizo nezinsizakalo?
2. Yiziphi iziphakamiso zenani elikhulu amabhizinisi okufanele ahlose kuzo ngenkathi enza imali entsha yocwaningo nentuthuko?
3. Yimiphi imithethonqubo ezosiza kakhulu kubabambiqhaza ukukhulisa inethiwekhi yabo yokuthengwa kwempahla?
4. Yiziphi izifunda ezingabona isidingo sikhula ezigabeni ezithile kungekudala?
5. Yimaphi amanye amasu wokwenza ngcono izindleko nabathengisi abanye abadlali abazinze kahle abaphumelele ngawo?
6. Yimiphi imibono esemqoka i-C-suite eyisebenzisayo ukuhambisa amabhizinisi kumzila omusha wokukhula?
7. Yimiphi imithethonqubo kahulumeni engabekela inselelo isimo sezimakethe ezibalulekile zezifunda?
8. Isimo esivelayo sezepolitiki nezomnotho sizowathinta kanjani amathuba ezindaweni ezisemqoka zokukhula?
9. Yimaphi amanye amathuba wokubamba inani ezigabeni ezahlukahlukene?
10. Yini ezoba yisithiyo ekungeneni kwabadlali abasha emakethe?
Ngokuhlangenwe nakho okunamandla ekwakheni imibiko yezimakethe ezehlukile, Ucwaningo lweTransparency Market seluvele njengenye yezinkampani ezethembekile zocwaningo lwemakethe phakathi kwenani elikhulu lababambiqhaza nama-CXO. Yonke imibiko yocwaningo lweTransparency Market ihamba ngomsebenzi onzima wokucwaninga kuzo zonke izici. Abaphenyi bakwaTMR babhekisisa emakethe futhi bakhipha amaphuzu okuzuzisa okukhulisa. La maphuzu asiza ababambe iqhaza ukuhlela amasu abo ebhizinisi ngokufanele.
Abaphenyi be-TMR benza ucwaningo oluphelele nolusezingeni eliphezulu. Lolu cwaningo lubandakanya ukuthatha okokufaka kochwepheshe emakethe, kugxilwe kakhulu entuthukweni yakamuva, nakwabanye. Le ndlela yocwaningo yenza i-TMR ivelele kwamanye amafemu okucwaninga ezimakethe.
Nakhu ukuthi iTransparency Market Market isiza kanjani ababambiqhaza nama-CXO ngemibiko:
Ukugxiliswa kanye Nokuhlolwa Kokubambisana Kwamasu: Abaphenyi be-TMR bahlaziya imisebenzi yamanje yamasu njengokuhlanganiswa, ukuthengwa, ukubambisana, ukusebenzisana kanye nokuhlanganyela. Yonke imininingwane ihlanganisiwe yafakwa embikweni.
Ukulinganiswa Kosayizi Ophelele Wemakethe: Umbiko uhlaziya inani labantu, amandla okukhula, kanye namandla emakethe ngesikhathi sesibikezelo. Lokhu kuholela ekulinganisweni kosayizi wemakethe futhi kunikeze nohlaka lokuthi imakethe izokuthola kanjani ukukhula ngesikhathi sokuhlola.
Ucwaningo Lwezotshalomali: Umbiko ugxile emathubeni okutshalwa kwezimali aqhubekayo nalazayo emakethe ethile. Lokhu kwentuthuko kwenza ababambiqhaza bazi ngesimo samanje sokutshalwa kwemali emakethe yonke.
Side Stand Puck, E Ukuhamba ngebhayisikili, Mpintsha On Bike, I-Light Blue Motorcycle, 22.5 Amakhava Amasondo, Ishaja yebhethri ehamba phambili yeLithium Motorcycle,